mairie-antananarivo – CUA : Miroso ny ho fanatsarana ny tsena Petite Vitesse
CUA : Miroso ny ho fanatsarana ny tsena Petite Vitesse
administrateur 6 martsa 2018 Commentaires fermés
Mitohy hatrany ny fanatsarana ny tanànan’Antananarivo Renivohitra ataon’ny fiadidiana ny tanàna, indrindra mahakasika ny tsena ary tsara marihana fa miroso ho amin’izany ny Ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana. Tafiditra ao anatin’izay firosoana ho amin’ny fanatsaràna ny tsena izay ny efa fanaparitahan’ny CUA ny fifanarahana amin’ny fiantsoana tolo-bidy ho fanatanterahana asa na AMI : Appel à Manifestation d’Intérêts, ho an’ny fanatsarana ny tsena etsy amin’ny Petite Vitesse.
Efa nisy ny fifampidinihana tamin’ireo mpivarotra eny an-toerana sy ny fitondrana foibe mahakasika ny fanatanterahana teknika an’izany, miaraka amin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra. Mikasika ny fanatanterahana ny asa dia efa an-dalana ny fijerena ny mpiara-miombon’antoka, tsy misy ny mpivarotra ailika amin’ny fanatanterahana izao tetikasa izao, ary ireo mpivarotra ao amin’ny Petite Vitesse no hisitraka voalohany amin’ireo tsena vaovao vita.
Araka ny nambaran’ny tompon’andraikitra ao amin’ny CUA, nanasonia ny fifanarahana avokoa ny delegen’ny mpivarotra ao amin’ity tsena ity, ary efa hisy ny toerana vonjy maika hamindrana ireo mpivarotra ireo eny an-toerana ihany mandra-pahavitan’ny asa. Tsy misy ny vola efain’ireo mpivarotra amin’ny fanaovana izao tetikasa izao, ka tsy tokony hisy noho izany ny fanahian’izy ireo. Mitsinjo hatrany ny mpivarotra ny CUA tarihan’ny ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana. Ny tanjona amin’izany rehetra izany dia ny fikarakarana ny fiainan’ny Malagasy, indrindra ny sarambabem-bahoaka araka ny filamatry ny ben’ny tanàna.
Mampahatsiahy ny CUA fa misokatra hatrany amin’ny fifampiresahana sy fifampidinihana mba hialàna amin’ny tsaho na izay mety fanakorontanan-tsaina eny amin’ny tsena ny fiadidiana ny tanàna. Ny CUA ihany koa dia manamafy fa rehefa miroso amin’ny asa iandraiketany dia miroso hatrany ary tsy mihemotra satria fampandrosoana ny tanàna sy ny fiainan’ny mponina eto an-drenivohitra no katsahana mandrakariva.